Sida tallaalka COVID-19 u shaqeeyo | How the COVID-19 vaccine works | Unite against COVID-19
Sida tallaalka COVID-19 u shaqeeyo | How the COVID-19 vaccine works
Markii aad si buuxdo u tallaalantahay waxaad si dheer ugu dhowdahay inaad si dhab ah u jiratid.
Halkan waxaad ogaaneysaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan sida tallaalka u shaqeeyo.
Tallaalka Pfizer waa tallaalka mRNA. Wuxuu wataa koodhka hidaha ee qeybta muhiimka ah ee fayraska SARS-CoV-2 (COVID-19) ee loo yaqaano ‘borotiinka fayraska’. Borotiinka fayraska waa noolaha yar ee oogada fayraska.
Markii aad qaadatid tallaalka, jirkaaga ayaa aqriyo koodhka hidaha oo sameeyo koobiyada borotiinka fayraska.
Difaaca jirkaaga ayaa ogaado borotiinka fayraskaan oo bartaa sida loo aqoonsado oo loola dagaalamo COVID-19. Wuxuu ogyahay inuu u baahanyahay in la weeraro fayraska si looga illaaliyo ku faafida jirkaaga.
Koodhka hidaha ee tallaalka ayaa kadib kala go’aa oo uga saaraa si dhaqsi ah oo fudud jirkaaga.
Waxyaabaha muhiimka ah ee laga ogaado tallaalada mRNA
Tallaalka kuguma ridi karo COVID-19
tallaalka mRNA ma wato wax ka mid ah fayraskaas oo sababa COVID-19, ama fayrasyo kaloo nool, dhintay ama dib loo nooleysiiyay.
Tallaalku ma saameeyo DNA-gaaga
Ma saameeyo ama ma dhexgalo DNA-gaaga ama hiddaha. tallaalada mRNA marnaba ma galo uguyada hidaha, taas oo ah sababta DNA-geena loo hayo.
Tallaalada mRNA wuxuu marayay hormarin tobaneeyo sanno
Tallaalada mRNA waxaa lagu sameeyay dhinaca iskaashiga weyn ee caalamiga ah.
Cilmi baarayaal ayaa daraasadeeyay oo la shaqeeyay tallaalada mRNA tobaneeyo sanno. Tani waxaa ka mid ah daraasadaha tallaalada lagula dagaalamo hargabka, Zika, rabaayadaha iyo bakteeriaalka neerfaha (CMV).
Saynisyahano ayaa sidoo kale baaray caabuqyada fayraska korona ee la soo dhaafay sida SARS iyo MERS. Markii saynisyahanada ay aqoonsadeen fayraska korona ee sababa COVID-19, waxay durbadiiba la qabsadeen teknooliyada COVID-19.
Inkastoo ay teknooliyo cusub tahay, tallaalkan wuxuu maray dhammaan baaritaanada badqabka caadiga ah iyo shuruucda.
Tani waxaa ku jiro tijaabooyinka caafimaadka caalamiga ah si ay uga caawiso muujinta waxtarka iyo badqabka tallaalka. Tallaalka Pfizer ayaa laga isticmaalay caalamka oo dhan oo si joogta ah oo dhow ayaa looga warhayaa waxtarka iyo badqabka.